Bank of China က ပြည်ပရှိ ကျောက်မီးသွေးတူးခြင်း၊ စွမ်းအင်စီမံချက်အသစ်များတွင် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရပ်ဆိုင်းမည် - Xinhua News Agency
Europe Social, Education & Health မြန်မာ-ENG
Agriculture China မြန်မာ-中文
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ရှိ Bank of China ရုံးချုပ်အပြင်ဘက်တွင် တယ်လီဖုန်းပြောနေသူတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Photo/Agencies)
ပေကျင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယခုနှစ် စတုတ္ထသုံးလပတ်မှစ၍ ဘဏ်နှင့် သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော စီမံကိန်းများမှအပ ပြည်ပတွင် ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ခြင်းနှင့် ကျောက်မီးသွေးလောင်စာသုံး စွမ်းအင်စီမံကိန်းများအတွက် Bank of China (BOC) က ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချမှု အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရေးနှင့် ၂၀၆၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီ ကာဗွန်အလယ်အလတ်အဆင့်ရောက်ရှိနိုင်ရေး ရည်မှန်းချက်အရ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို မကြာသေးမီက ရေးဆွဲခဲ့ကြောင်း ပေကျင်းမြို့အခြေစိုက် နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရောငွေထုတ်ချေးသူက စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ နည်းလမ်းအရ ဘဏ်အနေဖြင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်ပုံ၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာများ၊ ထုတ်ကုန် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု စစ်ဆေးမှုများနှင့် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အပါအဝင် ကဏ္ဍ ၁၅ ခုဖြင့် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းကာလ (၂၀၂၁-၂၅ ခုနှစ်) အတွင်း အစိမ်းရောင်ငွေကြေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် လမ်းပြမြေပုံတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးရေးဆွဲခဲ့သည်။
BOC က တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းအတွင်း ယမန်နှစ်ကထက် အစိမ်းရောင်စက်မှုလုပ်ငန်းအား ပံ့ပိုးနိုင်ရေးအတွက် ယွမ် ၁ ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၄.၆၄ ဘီလီယံ) အောက်မလျော့နည်းစေဘဲ ပေးအပ်ရန်နှင့် အစိမ်းရောင်ချေးငွေ (green credit) အချိုးကို စုစုပေါင်းချေးငွေများ တိုးမြှင့်ပေးရန် စီစဉ်ထားကြောင်း BOC က ဆိုသည်။ ၁၃ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းကာလ (၂၀၁၆-၂၀ ခုနှစ်) ကုန်ဆုံးချိန်မှ ၅ ရာခိုင်နှုန်းမှတ်အောက် မလျော့နည်းစေဘဲ ပြည်တွင်း ကော်ပိုရိတ်ချေးငွေများမျှခြေ၌ ပြည်တွင်း အစိမ်းရောင်ကော်ပိုရိတ်ချေးငွေများ၏ မျှခြေအချိုးကို တိုးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်သလို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှတ်အထိ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန်လည်း ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဘဏ်အနေဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းမှ ချေးငွေအာမခံခြင်း အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အားကောင်းခြင်းနှင့် စွမ်းအင်အမြောက်အများသုံးစွဲပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှု အမြောက်အများဖြစ်စေသော စက်မှုလုပ်ငန်းများအား ချေးငွေမျှခြေထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချခြင်းနည်းပညာများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဇီဝရုပ်ကြွင်းလောင်စာများနှင့် အလွယ်တကူအသွင်ပြောင်းလဲနိုင်သော အပူစွမ်းအင်ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ထိထိရောက်ရောက် အကျိုးရှိရှိအသုံးချခြင်း အပါအဝင် အစိမ်းရောင်စီမံကိန်းများအတွက် ချေးငွေပံ့ပိုးမှု မြှင့်တင်ခြင်းများအား ၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
BOC သည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ရေရှည်တည်တံ့အောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပံ့ပိုးရာတွင် ကြီးမားသော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဇွန်လကုန်အထိ ပြည်တွင်းအစိမ်းရောင်ချေးငွေ (green credit) မျှခြေမှာ ယွမ် ၁ ထရီလီယံကျော်ရှိပြီဖြစ်ကာ ယခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Bank of China to stop financing new coal mining, power projects overseas
By Jiang Xueqing | chinadaily.com.cn
Updated: Sept 26, 2021
Bank of China has committed to no longer provide financing for new coal mining and coal-fired power projects overseas, starting from the fourth quarter of this year, except for the projects whose contracts the bank has already signed.
The Beijing-based large State-owned commercial lender announced on Friday that it recently drew an action plan to serve China in terms of peaking carbon emissions by 2030 and achieving carbon neutrality by 2060. In this way, the bank has createdaroadmap for the implementation of its green finance plan during the 14th Five-Year Plan period (2021-25) in 15 aspects, including the organizational structure, business development strategies, product innovation, stress tests and international cooperation.
BOC said it plans to offer no less than 1 trillion yuan ($154.64 billion) to support the green industry during China’s 14th Five-Year Plan period and to increase the ratio of green credit to total loans year by year. It will increase the proportion of the balance of domestic green corporate loans in the balance of domestic corporate loans by no less than5percentage points from the end of the 13th Five-Year Plan period (2016-20) and will even strive to make an increase of 10 percentage points.
The bank will also accelerate the credit granting structure by industry, strengthen the management and control of the balance of loans to energy-intensive and pollution-intensive industries, and increase credit support for green projects, including the upgrading of emission reduction technologies, the clean and efficient utilization of fossil fuels, and thermal power flexibility transformation, during the 14th Five-Year Plan period.
BOC has made great efforts in supporting sustainable development of the global economy. As of the end of June, its balance of domestic green credit exceeded 1 trillion yuan, up more than 15 percent from the beginning of this year.
A man speaks on the phone outside the Bank of China head office building in Beijing, China. [Photo/Agencies]